QURBO JOOG “GOB BAAD TAHAY MOOG INTEEDA!” Sheeko Xiiso Badan.. | Hooyga Barbaarinta Qoyska & Wanaaga Bulshada
QURBO JOOG “GOB BAAD TAHAY MOOG INTEEDA!” Sheeko Xiiso Badan..
Published: January 9, 2016, 8:17 pm
(0) Comments QURBE JOOG!
“ku ibo fur beydka abwaan Weedhsame kugu leeyahay adigan akhrinaya GOB BAAD TAHAY MOOG INTEEDA!” Hubaal, dhallinyaro haddii la garan lahaa sharaf, shaqo iyo nolol sareba in dhulkaaga hooyo taal oo sidaa maanku qaadan lahaa! Wiilal badani saxaraha kuma silceen! Badduna ma liqdeen! Hooyona ma walwasheen! Dalkuna dhallin la’aan kama cabteen! Tahriibe ku sugan Germany.
Ha miyirsado isagoo rafaadsan daallan oo haddana tiiraanyaysan. Ma goor uu wax ka qaban karayaa! Illeen talo isuma kaa sheegto. Kulka iyo cadceedda lama degaanka ayaa tusay wakhtiyo iyo xilliyo uu talo ku diiday in ku xaq lahayd iyo in kaleba. Hase ahaatee si walba isagu wuxuu isu arkaa in uu si uun uga soo baxay dhibkii haystay! La yaab! Waxay maskaxdiisu u sawiraysaa inuu dhib haystay!
Kan hadda haysta ee uu la rafaadayo dhib uma arko! Rag baa tahay ee ka dabbaalo bay ugu warcelinaysaa maskaxdu markuu daal dareemo! Horumar, barwaaqo, isku filnaan iyo nolol sare ayaad gaaraysaa bay ku sii kaabaysaa! Is waydiin mayo intaa wuxuu uga heli waayay halkii uu ka unkamay! Halka uu ka soo baqoolay ama ka soo hayaamay!
Ku siman, 18 sanadood ka hor buu ku dhashay miyiga mudug. Barbaristiisii dhib-ba ha arkee si aan iin lahayn bay ku idlaatay. Aqoon la’aani ma heline dugsi hoose, dhexe iyo sare, ba wuxuu ku qaatay Gaalkacyo. Dharaar uu shaqo ka fikiro ama nololi kusoo fakato waxaa u horraysay subaxdii Aabbihii dhintay!
Iskuulka isagoon wali dhammayn se gabo gabo u yahay ayuu subax dareemay murug iyo walwal cusub! Meel laga soo galay garan uu mayo! Shoow wax baa lagu ilhaaminayaa….hadduu birirftii usoo baxayba wuxuu is yidhi gurigii iska aad. Waa kii fasax qaatayee xaafadoodii tagay.
Ismuu lahayn geerida aabbaha baad la kulmaysaa! Inyar markuu qubaystay, ayuu maqlay dhawaqa rasaasta! Durba nin dhiillaysan buu ahaayoo xurguftii beryahan aabbihii iyo oday deris xigeen ah kala haystay buu ogaaye, isagoo xiimayuu yimid boos la isku haystay! Mase! Halkan, aabbihii oo dhowr xabbadood ku dhaceen baa yaal! Xaggeerna kii kalaa ku naf baxay! Naxdintii intay ka badatay ayuu indho ilmo ka da’ayso lasoo dul istaagay aabbihii oo naftii ka sii baxayso inta jilbaha dhulka dhigtay buu madaxa aabbihi dhabtiisa saaray! Mar feeruhuu is yidhi dhiigga ka istaaji oo sacabka ku qabtay! Haddana caloosha! Suu haddana arkay bowdadoo dhiig hawda ku hayo! Odaygii…. Oo dareemay in wiilku badbaadintiisa ku wareeray dareennsanna in dhaawac fududi jirin ayaa cod daciif ah ku yidhi “Aaabbe…… aabbbe dulmi ha yeelin! Gardarro ha doonin! Dadaal kartidaada. Intaa markuu yidhi ayaa intii u dambaysay ka baxday!
Dhulkaa la wareegay Samaale. Wuxuu dhabta ku hayaa oo aabbihii oo wali dhiiggiisii kululyahay! Inkastuusan ciil qabin haddii kii kalena mar hore dhintay haddana tagidda uu aabbihi ka tagay ayuu qaadan la’yahay. Goor dadkii kusoo xoomeen ayaa abtigii Ayaanle gacanta kasoo qabanayaa goobta.
Tiraba 2 sano markuu dhabarka u ritay reerka shaqadiisa kuse qanacsanyahay waayaha nolosha oo uu la harjadayo dhibteeda, ayaa illeen waa camal dhallinyaree maalin un isaga uga xusuus badan maalmaha kale, wuxuu usoo labbistay shaqadiisii bare nimo ee dugsiga hoose dhexe ee Ummadda ee gaalkacyo. Si yididiilo leh ayuu ku idlaysta xisooyinkii isagoo mar walba ardayda yaryar ee uu wax baraa xusuusiyaan doorka uu kaga jiro kobcinta aqoontooda. Hadii uu is yidhi qado doono, oo uu albaabka ka sii baxayo ayuu isagoo sii jeeda oo qooraansanaya caruur 2 ah oo aad mooddo inay is dagaalayaan ayuu dareemay inuu qof ku dhacay qac dii uu soo jeestayba waxay indhihiisu qabteen qurux aannu islahayn adduunkay ka jirtaa!
Inaadeer Raalli ahow, iyo dhib malahantii la is waydaarsaday war umu hayn! Siman quruxdeeda un buu eegayay! Durba isagoo marxalad iyo xaal kale galay buu gurigii gaaray, inta shukumaan soo qaatay ayuu qubays uusan ku nafisin isku boobsiiyay oo salaaddii ku daray. Gabar walaashi oo qado usoo dhigtay baa ku maagtay, Samaale, malaha maqaaxiyaha ayaad maanta ka soo qadaysay? Si qof hurday oo la kiciyay buu lasoo hambaabiray, kama soo qadayne een…een… markay aragtay inuu jawaab heli la’yahay bay inta ka dhaqaaqday tiri waad daallantahay e seexo. Muxuu seexdaa ama qadeeya mucjiso ayaa la tusay miskiinka e! halaanhalkii maskaxdu fikirka la hadraysay buu meel uu inanta ka raadsho ama ay joogto ka fikiray! Oo maxaad markii ula hadli wayday? Mooyi. Oo maxaad ku odhan……..
Wakhtiga waayihiisa wataa wuxuu walaac ku abuuraba Samaale waxaa qaddartu gaadhsiisay inay gabadhii is bartaan is jeclaadaan……. Goor farxadii cirkaa u marayso…..oo isna jaamicadda bariga afrika qaybteeda gaalkacyo uu bilaabay, oo ay iskugu aaddami rabto, ayaa illeen waa duni aanad ogayne, ay ka kala tuurtay!
Filan waa haku noqoto gabadhii axdigu ka dhexeeyey, tan ay waayaha isla mareen….tan waashay ee qalbigiisa walaaqday…tan uusan la’aanteed saacad ka joogi karin,……inantii u horraysay una danbaysay ee uu jeclaadoo markii ay……markii ay la aqal gashay inan dibadda ka yimid oo QURBE JOOG AH.
Ha fikiro kaligii hana is waydiiyo ma xaq baa sidaan? Miyaan galabsaday sidaanna? Miyaan gubay reereheeda? Miyaan gabadhyahay ku caayay? Miyaan gaariyeey ku ciilay? Miyaan……miyaan……miyaan…….. Anigu kuma goyn macaanto….Anigu kuma goyn macaanto…..Nabsigu waa gaadh u joog!
Ku xigtayaa in Xuduudda itoobiya isagoo maraya la maqlay! Wuxuu ka cararayaa dhulka dhallintii joogtay ee dalka sharaftay….kan ka tagay uu ka sharaf badnaaday! Haa…wuxuu eedaynayaa Qurba joog! Haddana wuxuu is leeyahay maalin un qurbe joog noqo! Bal halka qayrkaa kolka ay ka yimaddaan kaa sharaf badnaanayaan tag! Oo bal sharafta lagaaga sarreeyo soo hel! Lacagta lagaa badanyahay soo hel!
Mukhalisiintii qabsatay intuu jidka ku jiray hadba wax hooyadii meel ugashaba ugu dambayn…. Gurigii oo 3 carshaan ah baa loo iibshay….haku galo liibiya isagoo faraxsan…..horay doon ka raac buu is leeyahay! Durba sweden ama netherland ama Germany ba iska dhiib baa u qorshaysan! Huuri yar oo intaasoo qof lagu raacayo ha bixiyo lacagtii lagu raaci lahaa.
Waa habeen saq dhexe, abbaaro 3 dii habeenimo. Waa habeenka ay uu subaxdiisa baxayo! Haa wuu faraxsanyahay saa’id. Isaga iyo wiil la socday baa u baahday cunto, meel lagu hayay inta kasoo baxeen ayay is dhaheen maqaaxi dhow raadsha. Laamiga markay dhexdiisa marayaan ayay si kadis ah maqleen hoonka gaadhi xammuul ah. Ku xigtayaa dareenka jugtii turuska gaadhigu ku dhuftay labadii inan! Dam! Mugdi!
Dadkii u dhawaa ayaa kusoo cararay! Mase Waa Meyd!
W/Q: Xasan Cabdullaahi Xaashi (Timacadde)
« Warbixinta Ka HoreysayCibro Qaadasho: Qisadii Cajiibka Aheyd Ee Fircoon Iyo Khabiir Ku Muslimay Dhacdadaasi Sidey U Dhacday..!!	Warbixinta Xigto »MUUQAAL Dagaal Naxdin Leh Oo Dhex Maray Mas Iyo Wiil Ugu Danbeyntiina Wiilkii Baa Guuleeystay..	HADAAD ISTICMAASHO FACEBOOK HALKAAN KU REEB FIKIRKAAGA	Leave a Reply Cancel reply